I-China Alumina Ceramic Seal Disc, I-Industrial Alumina Ceramic Seal Disc, i-Electrothermal I-Alumina Ceramic Seal Disc Supplier
Jinghui Industry Ltd. [Hunan,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:ISO9001, FDA Incazelo:I-Alumina Ceramic Seal Disc,I-Industrial Alumina Ceramic Seal Disc,I-Electrothermal Alumina Ceramic Seal Disc,I-Microporous Alumina Ceramic Seal Disc,,
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Discs
Izigaba zomkhiqizo we- I-Ceramic Seal Discs , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, I-Alumina Ceramic Seal Disc , I-Industrial Alumina Ceramic Seal Disc abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- I-Electrothermal Alumina Ceramic Seal Disc R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
I-High Purity Alumina Ceramic Disc Yompompi Wamanzi
Ama-Ceramic Seals kanye nama-Discs Okuzenzela Pump Yezamanzi
I-Diamond Polished Alumina Ceramic Seal neRegulator Disc
Ukuvalwa Kokubiza Kokubumba Kokubumba KaseCeramic okuhle Kokubeka uphawu
Ama-High Wear Resistance Ceramic Seal Discs
Ngomqondo wethu wokukhiqiza we-veteran kanye nobuchwepheshe bobuchwepheshe bokunjiniyela, wonke ama-discs e-ceramic seal esihlinzekile anendawo engingqayizivele yokuslayida, ubulukhuni banjengedayimane. Ziphinde futhi zinikeze amandla amakhemikhali ahlukile ngokumelene nama-acid kanye nezindawo ezikhiqiza i-alkali....
Ukuze kuhlukaniswe i-stator ye-ceramic ne-ceramic rotor kumadivayisi wokubopha ekukhiqizweni, amanye amakhasimende adinga umbala okhethekile kulawa disc ceramic disc. Siyakwazi ukukhiqiza imibala ehlukile ye-alumina ceramic disc yepompo yamanzi, okujwayelekile kupinki noma kumnyama. Kungani ukhethe i- alumina ceramic...
Ukugqoka okuphezulu okumelana ne-ceramic disc Ngobulukhuni bayo obuvelele njengedayimane, uphawu olwedlula, nokuqina okungajwayelekile kokuqina kwendle. Bekulokhu kujwayelekile kakhulu ukuyithola. Kule nkambu, abantu basebenzisa ukugqokwa kwayo okuhle, okungahambisani nokugqwala, izici zemvelo ezinobunzima. I-high c...
Sinikeza ukukhetha okujwayelekile kohlobo lwe-ceramic seal & disc kweziqu ze-ceramic, njenge-1/2 "i-ceramic disc, 3/4" i-ceramic disc. Zonke lezi zingqimba zama-ceramic seal nama-disc zinobukhulu obuqinile, intengo yokucwilisa efanelekayo kanye yokuncintisana. Babamba iqhaza elibucayi ekubambeni...
Ukuze uhlangabezane nobuchwepheshe obukhethekile bamakhasimende, imfuneko yokusebenza. Siyakwazi ukubhekana nezinhlobo ezahlukene ze-alumina ceramic disc ze-valve. Lawa ma-discum e-alumina ceramic asetshenziswa ikakhulu kuma-valve wokushisa we-modulatory, i-valve yokuguqula, i-valve yokulinganisa ye-surf kanye...
I-Ceramic disc yesikhuthu samanzi, idiski yamanzi, isikulufu sokugezela ngokuvamile senziwa ngama-95% alumina. Kulesi ensimini, abantu bakwazi ukusebenzisa yayo bafake kakhulu ukumelana, anti-ukugqwala, ezihlukahlukene nemithi nokhahlo izici imvelo, okwamanje, ne ubulukhuni yayo evelele njengoba idayimane, odlulele...
Ama-ceramic seals nama-discs epompo yemoto yezimoto anenzuzo evelele kwezobuchwepheshe ngokuqhathaniswa nezindawo zokubopha zomdabu (njenge-PTFE, insimbi, ikhabhoni). Ikakhulu, ukungahambisani kokugqoka okwenziwe ngomshini (i-ceramic kungaphezu kwezikhathi ezi-5 kunezinye izindlela). Futhi, izindikimba zama-ceramic...
Besilokhu sinikezela ngamakhulu edayimane le-alumina ceramic seal ne-discator yedayimane, lezi zingxenye ze-ceramic zisetshenziselwa uketshezi oluningi kanye ne-pneumatic control valve kanye ne-seal kopano. Kungani ukhethe i- alumina ceramic seal ne-disc yomlawuli? 1.Great dress ukumelana nesikhathi eside sempilo;...
Njalo ngonyaka, kufakwa ama-disc angaphezu kuka-30 ezigidigidi ze-ceramic disc kuhlobo olunhlobonhlobo lwe-mixer-single mixer, ukuxuba i-cartridge, i-Administrator, i-diinter. Futhi, sinikezela nge-ceramic seal disc eyenziwe ngokwezifiso yamaphampu amanzi, amadivaysi okulawula ezokwelapha, kanye nezimboni zokulawula...
Ama-discs e-ceramic seal, njengengxenye yokubeka uphawu, anezinzuzo eziningi. Inika amandla ukushintshwa kwama-discs okuvalwa okujwayelekile ku-valve yamaphampu, abalawuli, izikebhe, iziphazamisi ngenxa yobukhulu bomsangano obuqondile, ukumelana kokugqoka okungenakuqhathaniswa, ubulukhuni obukhulu, indawo enhle...
Siyakwazi ukuklama okuhlukahlukene kwamajometri akhethekile, ama-discs ahlukile we-ceramic seal ehlukile. Zonke lezi zindlela zokusika ze-ceramic seal zikwazile ukwenza ngcono, zithuthukise futhi zafakazelwa njengobulukhuni bedayimane obuphakeme kakhulu, indawo yokubeka uphawu ephezulu kanye nesikhathi eside...
Ukugqoka okuphezulu okumelana ne-ceramic disc Kule nkambu, abantu basebenzisa izinto zayo ezinhle kakhulu ezingahambisani, ezilwa nokugqwala, izici zemvelo ezibucayi, okwamanje, ngobulukhuni bayo obukhulu njengedayimane, idlula uphawu lokubopha nokuqina okungajwayelekile kokuqina. Bekulokhu kujwayelekile kakhulu...
Ukugqoka okuphezulu okumelana ne-ceramic disc I-Ceramic seal disc yesikhuthu samanzi, idiski yamanzi, isikulufu sokugezela ngokuvamile senziwa ngama-95% alumina. Kule nkambu, abantu basebenzise ukugqwala kwayo okuhle, okungahambisani nokugqwala, izici zemvelo ezibucayi, okwamanje, ngobulukhuni bayo obukhulu...
I-silicon carbide ceramic seal ring Indandatho ye-ceramic seal iyona hlobo oluvame kakhulu kumadivayisi e-seal ahlukahlukene. Siyakwazi ukunikeza ubukhulu obukhulu kakhulu kusuka kububanzi be-1mm kuya ku-300mm. Ingakhiwa ngomdwebo wamakhasimende ngamunye nokucaciswa. I-batch encane kakhulu iyatholakala ukunikela...
Ama-disc aphezulu we-ceramic discs I-Ceramic disc fa noma isitshebe samanzi, idiski yamanzi, isikulufu sokugezela ngokuvamile senziwa ngama-95% alumina. Kule nkambu, abantu basebenzise ukugqwala kwayo okuhle, okungahambisani nokugqwala, izici zemvelo ezibucayi, okwamanje, ngobulukhuni bayo obuvelele njengedayimane,...
I-China I-Ceramic Seal Discs Abahlinzeki
I-Alumina disc ceramic ikakhulukazi esetshenziselwa i-valve ye-robot, i-diverter amanzi njengengxenye eyinhloko yokufaka uphawu lokufaka uphawu.
Siye sanikeza ama-crayamic disc avela kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, kuhlanganise nezihlalo ezigcwele zokucaciswa okujwayelekile. Ngaphandle kwalokho, singasebenzisana kanye namakhasimende ethu ukusekela isidingo sabo esikhethekile ngomdwebo nokucaciswa kwabo.
I-Alumina Ceramic Seal Disc I-Industrial Alumina Ceramic Seal Disc I-Electrothermal Alumina Ceramic Seal Disc I-Microporous Alumina Ceramic Seal Disc I-Alumina Ceramic Seal Disks